Sheekh Muxidiin Celi: waxuu ahaa weerar waxuushnimo ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sheekh Muxidiin Celi: waxuu ahaa weerar waxuushnimo ah
La daabacay onsdag 18 november 2015 kl 12.54
Maalmo kaddib weerarkii argagaxiso ee Paris waxaa Raadiyaha Sweden laanta af soomaaliga soo gaaraya codadka Soomaali badan oo canbaareynaysa weerarkii argagaxiso ee habeynimadii jimcaha 13ka bishan ka dhacay magaalada Paris dalka Faransiiska.
Sheekh Cabdirahmaan Sheekh Muxidiin Celi oo ku nool magaalada Göteborg ayaa ka mid ah soomaalida canbaareynaysa weerarkii Paris jimcahii ee ey kooxda Daacish sheegatay in kadenbeysay. Sheekh Cabdirahmaan ayaa weerarkas ku tilmaamay mid waxuushnimo ah oo aan sal iyo raad marna ku laheyn diinta Islamka, kooxda sheegatay weerarkas na ay ka been sheegtay Islamka.
Sheekha ayaa dhanka kale ka digay saameyn xun oo weerarkas u soo jiido muslimiinta ku nool Yurub.
- shaki kamo taagna in weerarkas saameyn xun oo fuulxumo ah uu keenayo. sharteeda illaheyn hana mootiyo.
- Dadka waxas sameeyey kooxda raabaan ha ahaadaane, maxay kaga talo galeen todobada milyan ee muslimka ah ee ku nool Faransiiska? Maxay u soo jiideen? Waxay dileen dad kor u dhaafaya 128 qof, laakiin maxay ugu talagaleen todobo milyan oo caruur, haween, waayel iyo muslimiin nooc kasta iskugu jira oo lagu soo dhaweeyey Faransiiska, oo la siiyey xaquuqda muwaadiniinta kale ee Faransiiska? Todobadan Milyan oo ah kuwa awelba ka soo cararay cadaalad darada iyo dulmiga dhulka ay kuwaan ka taliyaan. Shartiina ay ka soo carareen baa laga dabokeenay, ayuu yeri Sheekh Cabdirahmaan Sheekh Muxidiin Celi oo la hadlayey raadiyaha Sweden.